ဧည့်သည်နှင့် emotionally connected ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်။ | Hotel essay ဧည့်သည်နှင့် emotionally connected ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်။ – Hotel essay
hotel amenities Vs the customer experience
ဧည့်သည်နှင့် emotionally connected ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်။
စံပြ ဟိုတယ် receptionist တစ်ယောက်မှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ လိုအပ်ပါသနည်။
ှSOP of hotel Operation
FO, Hotel Management
May 15, 2018 Aung Ko Leaveacomment
ဟိုတယ်မှာ ဧည့်သည်ရဲ့ experience က ကျေနပ်တယ် သဘောကျတယ် satisfied guest ဖြစ်တယ်ဆိုခြင်းသည် ထိုဧည်သည် နောက်ထပ်ပြန်ရောက်လာမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. ကိုယ့် brand နဲ့ သူတို့ connected ဖြစ်တယ်လို့ မခံစားရဘူးဆိုရင် နောက် booking လုပ်တဲ့ အခါ facilities တွေ နေရာ တွေ ဈေးနှုန်းတွေ ထည့်တွက်ကြအုံးမည် ဖြစ်ပေသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကိုယ့် ဧည့်သည်တွေအတွက် meaningful experience တစ်ခုကို generate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် emotionally connected ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လို့ လုပ်ရမလဲဆိုင်တော့ EQ emotional quotient မြင့်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ခန့်ဖို့လိုတာပါပဲ။
Real life example မေးခွန်းတွေကို အင်တာဗျူးတဲ့ အချိန်မှာမေးပေးပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် ဓာတ်လှေကား ပျက်နေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ check in မှာ လူတွေ အများကြီးစောင့်နေရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ သူတို အဖြေ က နွေးထွေးမှု့ရှိရဲ့လား၊ ကိုယ်ချင်းစာတက်လား၊ genius ဖြစ်လား ပြုံးနေလား eye contact ရလား အစရှိတဲ့ minor details လေးတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့် နာမည်ခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်တက်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။ “Max could you show Mr and Mrs Cooper to their room?” ဧည့်သည်ကို သူတို့ အခန်းနံပါတ်အားဖြင့် ဘယ်တော့မ ပြောဆို refer မလုပ်စေပါနှင့်။
. “You must be pleased to get out of that rain, I’ll get someone to take your coat,” or “Would you likeahot drink sent to your room inafew minutes?”.အစရှိ personal welcome လေးတွေ လုပ်ပေးတက်ပါစေ။
Friendship group ပုံစံ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဧည့်သည်နှင့် ရင်းနှီးမှု့ ရှိအောင် မိတ်ဆွေဖွဲ့တက်ပါစေ။ comedy show ဖြစ်သွားအောင်ထိတော့ လွတ်မထားပါနဲ့။
Reception desk အနောက်မှာပဲ အမြဲ မနေစေပါနဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရင်းရင်းနှီး ချည်းကပ်မိတ်ဖွဲ့ စကားပြောတက်အောင် အားပေးပါ၊ ဧည့်သည် ဘာကြိုက်တက်တယ် မကြိုက်ဘူဆိုတာ မှတ်သားထားပါ ။ အကယ်၍ complaint ရှိခဲ့သည် ဖြစ်သော် သူကြိုက်တာလေးတွေနဲ့ သူကို လွယ်လွယ် enjoy ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
Loyal guest တွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်က သစ္စာပြန်ရှိပါ။ tower အပိုပေးတာတို့ special touch နဲ့ services လေးတွေ လုပ်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ reaction ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားတာ ဧည့်သည် ဟာ သင့် ဟိုတယ်ကို twitter တို့ facebook တို့ အစရှိသဖြင့် တစ်ခုခုမှါ mention လုပ်ခဲ့ရင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပေးပါ comment ပေးပါ။ ဧည့်သည် နေခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး open questions လေးတွေး အချိန်ရရင်မေးပေးပါ။
Check out အချိန်ကလည်း check in နည်းတူ အရေးကြီးပါတယ်။
→ hotel amenities Vs the customer experience
← စံပြ ဟိုတယ် receptionist တစ်ယောက်မှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ လိုအပ်ပါသနည်။